MADII ODUU OMN : Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa guyyaa har’aa beellama – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMADII ODUU OMN : Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa guyyaa har’aa beellama
MADII ODUU OMN : Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa guyyaa har’aa beellamailaalaaluun murtii dabarseen, himata shororkeessummaa Abbaan alangaa, himatamtoota kanneen irratti banee ture kufaa taasisuun, mirga himata fooyyessuu dabrsuuusaa Abukaattoon hidhamtoota siyaasa Oromoo Obbo Gammachuu Guutamaa OMN-tti himan.
Galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti kan himataman namoonni 24 dhimmi isaanii har’a ilaalamee jira. Dhaddacha kanarratti, hirmaattonni hedduun argamanii hordofaniiru. Hidhamtoonni Siyaasa Oromoos bakkichatti argamuun murtii darbu dhaggeeffataniiru. Abbootii Alangaafi Abukaatonnis yaadni falmii isaan dhiheeffatan mana murtichaan dhaggeeffatameera.
Beellamni guyyaa har’aa kun Jala-murtii dhaga’uuf kan beellamame yoo ta’u, jala-murtii himataafi deebii Abukaattootaa sababeeffatee dhihaate kanaanis Manni Murtii Federaalaa Lidataa qabxiilee Abbaan Alangaa Himatamtoota kana ittiin himate keessaa muraasa kufaa taasise.
Qabxiilee murtiin irratti darbe keessaas, jalqabarratti Dhimma himatamtoota kanaa manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa ilaaluuf aboo hin qabu kan jedhu kufaa gochuudhaan, himata kana ilaaluuf manni murtichaa Angoo ga’a qabaachuusaa murtiin darbeera.
Itti aansuunis, dhimma Himatamtoonni mana murtiitti dhihaachuu akka hin dandeenye xalayyaatiin ibsatan ilaalchisuun, deebii mana murtii kan “himatamtoonni poolisiidhaan hasla dhihaatan” jedhurratti Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mohammad komee qaban ibsaniiru. Komii kana boodas, manni murtii wal hubannaa malee akka hin dabarreef dhimmicharratti irra deebiin ibsa kenneera.
Dabalatas ammoo, iyyaannoo Himatamtootaa kan ‘Abbaan alangaa Federaalaa yakka nuti hin qabneen maqaa nu xureessuun miidiyaaf ibsa laate’ jedhu ilaalchisuun manni murtii deebii kenneen, “Abbaan Alangaa Federaalaa himatamoo ta’u keessan malee, waan maqa balleessi ta’e hin dubbanne’ deebii jedhu kennee jira.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa oolmaasaa har’aatiinis, galmee yakkaa himatamtoonni kun ittiin himataman keessaa qabxiilee 6-10 jiran kufaa taasisee jira.
Innis, yakka Meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabachuu jedhu kan Obbo Jawaar Mohammad ittiin himataman manni murtii Federaalaa deebii abukaattonni barreeffamaan dhiheeffatan irratti hundaa’uun, Labsii Seera yakkaa caqasee himata kana kufaa taasiseera.
Himata sadaffaa ta’uudhaan kan Abbaan Alangaa himatamtoota kanarratti bane, labsii shororkeessumaa galmee Obbo Jawaar Mohammad ittiin himatame, Manni Murtichaa kufaa taasisuun mirga Abbaan alangaa himaticha fooyyessuu ammoo dabarsee jira.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa, Obbo Jawaar Mohammad irratti yakki dhihaate, ulaagaa Labsii shororkeessummaatiin himachiisu hin geenye kan jedhe yoo ta’u, Abbaan alnagaa garuu sababaafi ragaa yoo qabaate irra deebiitiin himaticha fooyyessuu ni danda’a jedhee jira.
Qabxiilee murtiin irratti darbe kan biroo keessaa, Himannoo 1ffaa kan Obbo Haamzaa Adaanaa ittiin himataman ture. Himannaan kunis ‘miidiyaarratti yakkaaf uummata kakaasuu’ kan jedhu ture.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha har’a ooleen, himata kana keessatti, Obbo Haamzaa Adaanaa miiduyaa kamirratti yakkaaf nama kakaase, maal jedhee nama akka kakaase wanti ibsame waan hin jirreef, himataicha kuffisuun mirga himannoo fooyyeffachuu abbaa Alangaaf eegee jira.
Qabxiin himannoo kufaa ta’e keessaa kan biraan ammoo, “deggertoota Shanee, Shanee waliin ta’uu” kan jedhu ture. Qabxiin kunis ilaalamuudhaan, manni murtii qaama Shanee jedhamu kan beekamtii shororkeessummaatiin nama himachiisuu qabu waan sirriitti hin ibsaminiif, himaticha kufaa taasisuun, mirga himata fooyyessuu abbaa alangaaf eegee jira.
Qabxiilee heeraman kanniin irratti Manni murtichaa erga murtii dabarsee booda, beellama itti aanu irratti qabxiiwwan himataa fooyya’aniifi hafan ilaaluuf guyyaa torba erga laatee booda, Abbaan angaa mormii dhiheeffateen wal falamii gamaa gamanaa dhaggeeffatameera.
Abbaan Alangaa “himata fooyyeffannu waan qabnuuf akkasumas ammoo abbootiin alangaa himata kana banan biyya keessa waan hin jirreef, beellamni ji’a tokko akka nuuf kennamu barbaanna” jechuun gaafate.
Garee Abukaatoofi himatamtoota keessaa ammoo Obbo Dajanee Xaafaafi Haamzaa Adaanaa falmii kanatti hirmaachuudhaan turtii ji’a tokko akka madaalawaa hin taane ibsan.
Obbo Dajanee Xaafaas “Fedhiin Abbootii Alangaa akka nuti mana hidhaa keessa turrudha. Kanaaf yeroo beellama dheeressu. Kan nu himate Mootummaadha malee Abbaa Alangaa tokko miti. Kanaaf himaticha fooyyeffachuuf yeroon manni murtii jedhe ga’adha” jechuun dubbate.
Manni murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataas falmii gamaafi gamanaa dhaggeeffachuudhaan, gaaffii
abbaa Alangaa beellama ji’a tokko jedhu kuffisuudhaan, beellama guyyaa 10 boodaa Amajji 14.2013tti beellama haaraa qabateera.
Ethiopia!Leenjiin WBO loluuf kennamu akkuma itti fufetti jira.Daa’imi!